SomaliTalk.com » IGAD
Home » Qoraallada Halkudhegga "IGAD"
Maxaa Ka Soo Baxay Shirkii Urur Goboleedka IGAD iyo Bankiga Horumarinta Afrika Ee Lagu Qabtey Caasimadda Dalka Jabuuti.
Aqoon is-weydaarsi socodey laba maalmood oo ay ujeedadiisu ahayd bilowga mash-ruuca ka hortaga abaaraha iyo horumarinta xoolaha ee Geeska Afrika oo socon doona mudo 3-sanno ee soo socota, isla markaana ay si wada jir ah u sooqaban qaabiyeen Urur Goboleedka IGAD iyo Bankiga Horumarinta Afrika oo ay ka soo qayb galeen khubaradda xannaanada xoolaha, Beeraha IWM ee wadamadda Urur goboleedka IGAD, xubno...
War Hilbaha Culimada waa Sun eh IsKa Ilaaliya !!!
Maxamed SH Cumar Faaruuq ibnicumar@yahoo.com ———— Asalamu Calaykum Wraxmatulaahi Waxaan ka cudurdaaranayaa gaar ahaan bahda Somalitalk ku xiran in aan muddo hawada ka maqnaa oo aanan waxba ku soo qorin in muda ah boggan qiimaha gaarka ah u leh Soomaalida akhristayaal aad bandanna ay ku xiran yihiin . Qormadan aan cinwaanka ooga dhigay sida idiin muuqataba waxaan jeclahay in...
Halkudheg: Faaruuq, IGAD
Sheikh Cumar Faaruuq oo (July 2010) u waramayey idaacaadda wararka u faafisa Madaxtooyada DFKMG ee Muqdisho ayaa muujiyey in uu ogolyahay in dalka Soomaaliya la keeno ciidamo shisheeye. Sheikh Cumar Faaruuq (2010) Halkan ka dhegeyso 28kii Janaayo 2007 oo ahaa markii muqawamadu la dagaalamayeen ciidamadii Itoobiyaanka ee dalka soo galay, ayaa Sheikh Cumar Faaruuq waxaa waraysi la yeelatay shabakada...
Safiirada dalallka Sudan, Kenya, Somalia, Ethiopia, Uganda ee ku sugan dalka Jabuuti iyo saraakiil sare oo ka socdey wasaaradda arrimaha dibadda dalka Jabuuti ayaa Shir Al-baabada u xiran ku yeeshay xarunta Ururkaasi ee caasimada dalka Jabuuti 28/02/2010. Shirkan oo socdey saacado badan ayaa warar aynu ka helney dadd goob joogeyaal ah waxay sheegeen in looga hadlayey arrimaha ammaanka gobolka iyo...